BRAZIER DO-IT-YOURSELF, OO KA SAMAYSAN LEBENYADA BIRTA, SAWIRRADA, VIDEO - INFRASTRUCTURE
Way adag tahay in la qiyaaso naftaada oo aan soo booqday kebab ugu yaraan dhowr jeer inta lagu jiro xilli. Badanaa, khidmadaha dabiiciga ah way dhib badan yihiin maqnaanshaha dabeecadda ugu weyn - brazier, taas oo ka dhigaysa xakamayntan sidaas xitaa waxoogaa yar. Ugu dambeyntiina, waxaad go'aansataa inaad sameysid gacantaada gacmaheeda boggaaga, laakiin ma ogid qofkuu dooranayo iyo halka laga bilaabo. Kadibna waxaan kugula talinaynaa inaad is-xakameysid oo aad dulqaaddid maqaalkani.
Nooca ugu fudud iyo kan ugu fudud ee brazier waa sanduuq ka samaysan biraha wax lagu duubo, oo ku yaalla lugaha lugaha, hoose ee dhuxusha waxaa lagu shubay. Sidoo kale in naqshadeynta waxaa la samayn karaa godad iyo grooves for skewers. Qoryaha la kariyo ama la qaadi karo - inta badan qaabdhismeedka birta ee qaabka isku midka ah. Dhibaatooyinka noocan ah ee dhismayaasha ayaa ah mid u qalma in la muujiyo nuglaanshaha. Intaa waxaa dheer, haddii derbiyada dhismuhu ka samaysan yahay xaashi aad u weyn oo bir ah, roodhihiisu waxay noqotaa mid caqli gal ah inta lagu gudajirayo.
Dhismaha barbecaanka joogtada ah wuxuu noqon karaa mid aad uga duwan: laga bilaabo qaabka caadiga ah ee caadiga ah ilaa asalka dhabta ah. Sidoo kale waxay khuseysaa cabbirka. Marka aad dooranayso wax, maaha inaad xaddidid midkood: Inta badan waxaa jira sawirro diyaar ah oo ah qaabab ka sameysan dhagax, lebbaal iyo bir.
Ma taqaanaa? Laga yaabe, waxaan leenahay abuurnimada caruurnimada Carabta. Ereyga Turki ee "Mangal" wuxuu ka yimid Carabiga "Menkal", roaster. Waxaa la yaab leh in Sanskrit "Mangala" - magaca masaafurinta Mars iyo magaca ilaah ee la xidhiidha.
Badeeco ka timid birta
Badeecadaha ka sameysan biraha - qaababka dabka ee ugu caansan. Rugkani waxaa si sahlan loo samayn karaa gacmahaaga, go'aaminta xajmiga aad u baahan tahay iyo iibsashada dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah. Qiyaas ahaan 30 cm dhismo ballaaran, 50 cm dheer iyo 15 cm qoto dheer iyo hal mitir sare (lugaha) waxaad u baahan doontaa:
Biraha saqafka (sanduuqyada) - dhumucda 2mm;
Birta birta ah 25 (lugaha iyo xoojinta) - dhumucdiis 3 mm;
Dhuxulo bir ah (shelf) - 4 xabbo 50 cm dheer.
Waxaan ku siineynaa talaabo talaabo talaabo ah oo ku saabsan soo saarida wax cunnida sida gacmahaaga.
Markaad diyaarineyso dacha, waxaad xiiseyn doontaa inaad barato sida loo sameeyo ilo, sida loo sameeyo xayndaab, gogosha dhagaxyada, xayndaab qoryo qoryo leh, qulqulo qulqulaya, gaas, shimbir beer, beerta beerta iyo dhirta beerta, maqaallo caag ah.
1. Ka jar qaybta biraha ee qaybaha aad u baahan tahay:
Qeybta hoose waa 50x30 cm;
Labo gidaar 30x15 cm;
Laba darbiyo 50x15 cm
2. Goosta geesaha:
4 lugood 1 mitir dheer;
Dib-u-dhiska hoose ee - saddex 30 cm mid kasta iyo laba 50 cm mid kasta;
Xoojinta derbiga - laba, 30 cm mid kasta iyo laba 50 cm mid kasta.
3. Haddii aad haysatid bir adag oo buluug ah - u jar jarjarada: 6 ilaa 50 iyo 2 illaa 30 cm.
Samee sanduuqa oo hagaajiya derbiyada iyo hoose ee brazier mustaqbalka leh mashiinka alxanka.
Isku-dhaji qaabka soo baxay ee dusha gudaha iyo dibedda.
Ku nadiifi bareesada dibedda oo leh Booqaal.
Ku xir qaybta geeska sanduuqa leh lugaha oo si kadis ah u xir qaybta hoose.
At dhererka qiyaastii 30 cm oo ka soo jeeda birta birta ah ayaa cidhiidhi ah u dhexeeya lugaha agagaarka wareega iyo dheeraadka u dhexeeya iyaga. Soo qaado nooc khariidad ah.
Waxaan sameynay xoojinta sanduuqa
On wareega ah ee hoose ee sanduuqa, weld geesiyo, 30 iyo 50 cm dheer, iyo hal, 30 cm dheer, ee dhexda width ee sanduuqa.
Samee isku mid ah wareegga banaanka ee sanduuqa.
Labo gacmood ka soo dheji 50 rodol dheer si aad u awooddo inaad u dhaqaaqdo dhismaha.
Ka xidh jarjarada wax yar oo ka hooseeya xoojinta.
Dhammaan wixii hadhaa waa in la qodo godadka kulul ee derbiyada sanduuqa oo laga gooyo BooqILe leh hollows for skewers.
Waa muhiim! On brazier ee cabbirkan, ha ka badan siddeed jarista loogu talagalay skewer, haddii kale waxay faragelin doonaa kasta oo kale marka la shiilayo.
Khayraadka Internetka ee loogu talagalay dhismaha farsamada dhismaha iyo dhaqaalaha guriga, waxaad kaloo ka heli kartaa sawirro badan oo khudrado badan oo laga sameeyey leben.
Waxa kale oo aad dhisi kartaa barn, sawirro, derbi xajineysa oo ka samaysan tuubada.
Kacbada brazier ee ay sameeyaan gacmahaaga waxay u adeegi karaan sida quruxda leh ee qaabka shakhsi ahaaneed.
Waxaan kuugu soo bandhigeynaa algorithm si aad u dhisatid dhismo qashin qubka classic ah:
Marka hore, dooro meesha uu dhismuhu ku yaal. Qaybta la soo jeediyey ee brazier ayaa ku yaala makhaayadda guriga.
Si loo dhiso qaabdhismeedka si siman marka la eego dhismaha kuxiga ah, go'aami diyaaradda aad bilaabi doonto inaad dhigto. Qaado qoryaha asbestoska ah ee horay loo dajiyay ee xarigaha xagasha hoose. Ku dhaji ciddida qarkaha tuubada oo xadhig ku dheji suunka si ay u taabato dabaqa leh hal dhinac. Diyaari ahaanba, ku dheji tareen kale. Adiga oo dhan u soo qaadaya hal diyaarad, waxaad xaqiijin doontaa in brazier si sax ah loo dhigayo qulqulka iyo derbiyada.
Samee laba xabbadood oo xuddun ah sida sawirka.
Marka ay gaarto heer dherer ah iyo tirada safafka dushooda, ka samee boodhadhka qoryaha laga bilaabo geesaha iyada oo loo marayo dhismaha guud ee broiler.
U qurxin kareemka drovnik, jajabyada ka soo jeeda qarkood oo muhiim u ah qaabka iyo qiyaasta.
Sare a drovnika jebin lebbiska.
Bilow in aad soo saartid subframe, oo sameysma dariiqyo lagu qurxiyo.
Tuuji hoose ee nadrovnik-la dhisay oo isku dhaf ah ama dhoobo iyo jiif dildillaaca ilaa dhererka lagu tilmaamay sawirka.
Ka dib markaad gaarto meesha ay ka buuxsantay broiler lafteeda waa in la sameeyaa, qulqulka derbiyada gudaha leh lebbiska nadiifka ah, ka soo baxa derbiyada dibedda, oo samee ilig (derbi gadaal ah).
Ka samee godadka derbiyada ee khadka.
Ka samee daboolka brazier.
Qulqulka derbiga gadaashiisa. Dhabarka tubada waa inuu ahaadaa mid ka mid ah lebbiska.
Ku dheji darbiyada hore iyo dhinacyada cidhiidhiga qulqulka, jihada jilbaha.
Meelaha godadka ku dhajiya tuubada.
Tijaabi naqshadeynta: hubi naqshadeynta iyo qiiqa barafka.
Ku rakib wejiyeyaasha iyo qatarta. Haddii loo baahdo, waxaad samayn kartaa qalabka qaybta sare ee dhismaha.
Waa muhiim! Ku dhaji derbiyada dibedda ku jira isku-qasanaha isku-qasan, iyo gudaha - on qaboojiye.
Fikradaha aan caadi ahayn
Haddii aadan jeclayn qaacidada aadna tahay mid aad uwanaagsan, waxaad u maleyneysaa in braziers ay ka dhalanayaan dhalo gaas ah, garoon kubadeed iyo waxyaabo kale. Waxaan kuugu soo bandhigeynaa fikrado xiiso leh oo ku saabsan mowduucyada barbecues.
Dukaanka, wuu soo baxaa, waxaad cuni kartaa oo kaliya cunto aan cunto ahayn.
Wax soo saarida mashiinnada dhar-toosku weli ma taagna.
In dareenka suugaaneed ee "la qaadi karo".
Ma taqaanaa? Dadka reer Soofiyeeti waxay u suurtagashay in ay kebabs ka baxaan iyaga oo aan guryahooda ka tegin: braziers korontada ku shaqeeya kuleylka kuleylka ayaa aad u caan ah.
Noqo oo la abuuro.